मान्छे तान्ने त्रिशूली : ०७३ यता २३८ दुर्घटना, १७७ को गयो ज्यान - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
मान्छे तान्ने त्रिशूली : ०७३ यता २३८ दुर्घटना, १७७ को गयो ज्यान
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडक र पृथ्वी राजमार्गको मौवाखोला–मुग्लिन सडकमा दुर्घटना भइरहन्छन्। अधिकांश दुर्घटनामा सवारीसाधन सोझै त्रिशूलीमा खस्छन्। कतिपय सवारीसाधन नदीमै हराउँछन्। दुर्घटनाको तथ्यांक हेर्दा त्रिशूलीले धेरै मान्छे खाएको छ।
साउन २१ । राजविराज, केही दिनयता गर्मीसँगै लगातार परेको वर्षाका कारण सप्तरीमा सर्पदंशका घटना बढ्दै गएका छन् […]
सिन्धुपाल्चोकमा पुनर्निर्माण सुरू नै भएन
मेलम्ची । भूकम्प गएको एक वर्ष वित्न लाग्दासमेत आजसम्म पुनःनिर्माण गर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन । भूकम्पका […]
राष्ट्रपति चुनाव: आज रातिदेखि मौन अवधि,विवेकशील साझाको भोट कसलाई ?
काठमाडौं । मंगलबार हुने राष्ट्रपति चुनावका लागि आज रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ । मौन अवधि सुरु भएपछि चुनाव […]
प्रेमीसँग मिलेर पति हत्या गरेको आरोपमा एक महिला पक्राउ
असोज ३ । राजविराज,सुनसरी हरिपुर गाविस ८ का ४० वर्षीय मो. मस्तकिम मियाँको हत्याको आरोपमा पत्नी ३२ वर्षीया […]
भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन विभागको आग्रह
काठमाडौं । नेपालका कतिपय स्थानमा आगामी तीन दिन भारी वर्षाको सम्भावना छ। अधिकांश भेगमा भने सामान्य बदली रहने […]
ढिलोमा पाँच दिनभित्र संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाइने
साउन ६ । काठमाडौँ, नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव समितिले सर्वसाधारण जनताले मस्यौदामाथि दिएका सुझावलाई समेटी […]